ဖမ်းဆီးခံရသူများလွတ်မြောက်ရေး အပြာရောင်ဝတ်စုံ Blue Shirt ကမ်းပိန်းပါဝင်ကြရန် နှိုးဆော် – DVB
Burma's most prominent former political prisoner, right hand man to Aung San Suu Kyi and founding member of the National League for Democracy (NLD), U Win Tin demands the release of Aung San Suu Kyi for the campaign to release Burma's political prisoners "Even Though I'm Free I Am Not". The veteran journalist, is one of Burma's foremost outspoken critics of the ruling military regime and despite having spent more than 19 years in Insein prison and faced with the constant danger of re-arrest, he continues to work tirelessly to promote democracy and human rights in Burma.
ဖမ်းဆီးခံထားရသူများ ပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ အပြာရောင်ဝတ်စုံ Blue Shirt ကမ်းပိန်းကို ဧပြီ ၂၁ ရက်မှာ အားလုံး ပါဝင်ပြုလုပ်ကြဖို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့်ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီး အိသဉ္စာမောင်အပါအဝင် ထင်ရှား ကျော်ကြားသူတွေ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကနေ အွန်လိုင်းကနေ တိုက်တွန်းပါတယ်။
ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာ တီရှပ်အပြာကိုဝတ်၊ လက်ဖဝါးမှာ အဖမ်းခံရသူ တစ်ဦး နာမည်ကို ရေးကာ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်တင်ပြီး စစ်အာဏာရှင်လက်အောက် မတရားအကျဉ်းချခံရသူများ အားလုံးကို လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပေးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့ဟာ စစ်အုပ်စုရဲ့ ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်အကျဉ်းချ နှိပ်စက်တာကိုခံခဲ့ရတဲ့ သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်ဟာ အကျဉ်းထောင်က ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပေမဲ့ ကွယ်လွန်သည်အထိ အပြာရောင် အကျဉ်းထောင်ဝတ်စုံကို အစဉ်တစိုက်ဝတ်ဆင်ပြီး စစ်အုပ်စုကို ဆန့်ကျင်သွားခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းမှု ၂ လ ကျော်အတွင်းမှာ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ၊ သတင်းထောက်တွေ၊ ဒီမိုကရေစီအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ပြည်သူလူထု ၃၀၀၀ ကျော် မတရားဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ခံထားရတာပါ။
ဒါ့အပြင် အနုပညာရှင်တွေ၊ ထင်ရှားကျော်ကြားသူတွေ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ဆရာဝန်တွေကိုလည်း စစ်ကောင်စီက မတရားတဲ့ ပုဒ်မတွေနဲ့ နေ့စဉ် ဖမ်းဝရမ်းတွေ ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။
နမ္မတူမြို့နယ် မန်လီကျေးရွာက စစ်ဘေးမီးဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက်ကူညီ